बुलबुले, परावर्तन - अब परिवेश चमक! | Martech Zone
बुलबुले, रिफ्लेक्सन - अब एम्बियन्ट ग्लो!
बिहीवार, जनवरी 25, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मेरो पुरानो विषयवस्तु स्क्रॅप गरेपछि, पूर्वनिर्धारित कुब्रिक विषयवस्तु ममा बढ्न थाल्‍यो ... यो सफा र सरल छ। मेरो अन्तिम विषयवस्तु बारे धेरै रिबिंग पाउँदा (धेरै, धेरै, धेरै अनुकूलित) उर्फ ह्याक गरियो Anaconda विषयवस्तु) WordPress २.१ को साथ ब्रेक गर्दै, म नयाँ विषयवस्तु लिन र चाँडै जानको लागि प्रेरित भएको थियो।
सायद सबैभन्दा खराब (वा उत्तम) रिबिंग मैले लिएँ प्रो ब्लगिंग द्वारा जॉन चौ, जो आफ्नो समय निकाल्यो मोगुलि। ब्लगमा आउन र मलाई गाह्रो समय दिन। धन्यवाद जोन! म ठूलो स्वरले हाँसे।
म आज रातको ब्लगको बारेमा अलि राम्रो महसुस गर्दैछु। मलाई लाग्छ कि म वेब 3.0. 2.0 को लागि अर्को ठूलो क्रेज शुरू गर्न जाँदैछु ... परिवेशको चमक बुलबुले धेरै वर्ष पहिले अलि बढाएका थिए र पछिल्ला दुई वर्षहरू प्रख्यात वेब २.० प्रतिबिम्ब भएको छ। नयाँ एलसीडी र एचडीटीभी सेटको साथ एम्बियन्ट लाइटमा सबै क्रेज हुनुको साथ (त्यहाँ मूल्यहरू राख्नको लागि तपाइँले केहि गर्नुपर्नेछ), मलाई पक्का छैन कि यो अर्को हो ठुलो कुरा वेबमा
तपाईं यहाँ यो सुने, मान्छे! म तपाइँलाई WordPress कुब्रिक ब्लू एम्बियन्ट ग्लो थिमको साथ प्रस्तुत गर्दछु। मैले साधारणतया सबै छविहरू बदल्छु, केही थप थप्यो, र हेडरमा मैले कोड थपेको कोठा छोड्न केही कोड ट्वीक गरें। मैले केहि सीएसएस परिमार्जन गर्नुपर्‍यो। मैले साइट I7, फायरफक्स २ (म्याक र पीसी) मा हेरेको छु ... यति धेरै राम्रो। यदि आईआई… मा राम्रो देखिदैन भने ... ओह, नयाँ ब्राउजर डाउनलोड गर्नुहोस्! तिनीहरू अझै स्वतन्त्र छन्!
म अझै एक जोडी प्लगइनहरूसँग लडिरहेको छु कि '२' ती २.१ तैयार छन् तर तिनीहरूले साइट लक गर्दछ। म यस साइटको अघिल्लो महिमामा ट्वीक गर्न र विकास गर्न जारी राख्छु। धैर्यवान हुनुहोस्!
मैले WordPress २.१ लाई तोडें
ठूला प्रोग्रामिंग शब्दहरू वा वाक्यांशहरू
जनवरी 26, 2007 मा 10: 18 एएम
यदि तपाईं चौडाई हटाउनुहुन्छ: १००%; # मेनुबरबाट जुन तेर्सो स्क्रोल समस्या समाधान गर्नुपर्दछ।
जनवरी १, २०१ 26 १२::2007 अपराह्न
धन्यवाद, Ade! म तपाईंलाई खाजाको लागि .णी छु।
जनवरी 26, 2007 मा 11: 41 एएम
डग सम्म राम्रो देख्दै, मलाई चमक मन पर्छ! 🙂
मलाई यो राम्रो देखिन्छ! म साइटमा चीजहरू छिटो पाउन सक्षम देखिन्छु (केवल आँखा बलिंग चीजहरू द्वारा)।
बीटीडब्ल्यू, के तपाईंले महसुस गर्नुभयो कि अब तपाईंले फिलिप्स टिभीहरू (विज्ञापन-भावबाट) धकेल्दै हुनुहुन्छ - र पहिलो सम्बन्धित लेख "जेट ब्लूले मुसलमान पायलटद्वारा मुद्दा दायर गरेको छ" LOL हो। मलाई लाग्छ कि "निलो" ले त्यो सम्बन्धित लेखलाई ट्रिगर गर्‍यो ...?
मैले त्यो देखे! प्रकारको हास्यास्पद।
राम्रो देखिन्छ, डग!
BTW, कुन थ्रेडेड-टिप्पणी प्लगइन तपाईं प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
धन्यवाद, स्टर्लिंग। म ब्रायनको थ्रेडेड टिप्पणीहरु प्रयोग गर्दैछु। यो धेरै खराब छैन। मैले यससँग काम गर्ने फरक 'टिप्पणीमा सदस्यता लिने प्लगइन स्थापना गर्नुपर्‍यो ... र सदस्यता फारामको पूर्व-जाँच गर्नको लागि मैले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्‍यो।
म अझै एउटा कुरा गर्न सक्छु र त्यो कुकीमा जानकारी बचत गर्नका लागि चेकबक्स थपिएको छ।
तपाईको परिवेशको चमक भनेको के हो?
मेरो मोनिटर भाँचिएको हुनुपर्दछ।
मैले ढाँचा हेडर र निलो किनार देखें।
mmmhh .. निलो…। सेतो…। कोल्टहरू ... मलाई लाग्छ कि मैले ढाँचा देख्छु।
यो वास्तवमा निलो सीमा होइन यो ग्राफिकमा फिसर्ड प्रभाव हो यसलाई अन्तर्निहित प्रकाश जस्तो देखिन्छ। यो थोरै अस्पष्ट छ।
जनवरी १, २०१ 28 १२::2007 अपराह्न
बुलबुले ... परावर्तन ... तर प्रसिद्ध के हो "छाया ड्रप"? यो एक हो कि यो सबै शुरू गर्नुभयो!
मलाई कलेजमा कसैले गरेको टिप्पणी याद छ; "यदि मैले अर्को ड्रप छायाँ देखें भने, म पक्की छु।" कहिले काहिँ राती राती, मलाई अचम्म लाग्छ कि ऊ अझै बिरामी छ।
मैले 'ओएल ड्रप छाया भुलेँ! यो सबै सुरु भयो, हैन ?!